Ahoana ny famindrana ny tranokalanao WordPress amin'ny sehatra vaovao | Martech Zone
Ahoana ny famindrana ny tranokalanao WordPress amin'ny sehatra vaovao
Talata, Novambra 26, 2019 Talata, Novambra 26, 2019 Douglas Karr
Rehefa mampiasa ny tranokalanao WordPress amin'ny mpampiantrano iray ianao ary mila mamindra azy amin'ny iray hafa, dia tsy tsotra araka ny eritreretinao azy. Ny ohatra rehetra amin'ny WordPress dia misy singa 4… ny fotodrafitrasa sy IP adiresy at at at, the Database MySQL izay misy ny atiny, ilay nakarina rakitra, lohahevitra ary plugins, ary WordPress tenany.
WordPress dia manana rafitra fampidirana sy fanondranana, saingy voafetra amin'ny atiny tena izy. Tsy mitazona ny fahamendrehan'ny mpanoratra izy io, ary tsy mamindra ny safidinao - izay ivon'ny fametrahana azy rehetra. Fohy ny tantara… tena maharary izany!
mampiasa BlogVault, Nameno ny plugin tao amin'ny tranokalaniko loharano aho, nanampy ny adiresy mailaka ho fampandrenesana, ary avy eo nampiditra ny mari-pamantarana URL sy FTP vaovao. Tsindrio ny fifindra-monina… ary minitra vitsy taty aoriana dia nanana mailaka tao anaty boaty aho fa nafindra ilay tranonkala.
Tsy nila nanao na inona na inona ara-bakiteny aho… ny safidy rehetra, ny mpampiasa, ny fisie sns dia nafindra tsara tamin'ny mpizara vaovao! Ankoatra ny fitaovana fifindra-monina mampino azy ireo, BlogVault dia serivisy fitehirizana feno izay manolotra fiasa hafa ihany koa:
Test indray - Te hiverina amin'ny kinova taloha tamin'ny tranokalanao ve ianao? Fa ahoana no ahalalanao raha marina izany? BlogVault dia mamela anao hampiditra ny kinova famerenam-bidy voafantina amin'ireo mpizara fitsapana azy ireo ary ho hitanao miasa toy ny tranokala tena izy.
Famerenana amin'ny laoniny auto - Tsy maninona na voarohirohy ny tranokalanao, na ny tsy fetezan'olombelona vokatry ny tsy fahombiazana, eo anilanao hatrany ny BlogVault mba hampiarina haingana ny tongotrao. Ny endri-pamerenana Auto-Restore dia mamerina ho azy ny backup amin'ny lozisialy amin'ny fotoana ilanao azy, tsy mila fanelanelanana amin'ny tanana.
Security - BlogVault dia manome antoka ny fiarovana 100% amin'ny alàlan'ny fitehirizana kopian'ny backup misy anao amin'ny toerana tsy miankina amin'ny tranonkalanao. Ny backup-nao, izay voahodid, dia voatahiry ao amin'ireo ivon-drakitra azo antoka ary koa amin'ny mpizara Amazon S3. Tsy toy ny fampiasana Amazon S3 mahazatra, tsy tahirizin'izy ireo ho toy ny ampahany amin'ilay tranokala izy ireo, ka hanalefaka ireo hacks mety hitranga.
tantara - BlogVault dia mitazona tantaram-piainan'ny 30 backups anao mba hahafahanao miverina any amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
backups - BlogVault dia mandray fomba hafa hanampiana ny dingana famerenana, famerenana ary fifindra-monina. Tsy misy ifandraisany raha mifindra monina ny BlogVault, manohana, na mamerina amin'ny laoniny ny tranonkala iray, tsy miova afa-tsy izay niova hatramin'ny nifindrana farany. Mamonjy fotoana sy fantsom-pifandraisana ity.
Midira ao amin'ny BlogVault
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i BlogVault.
Tags: blogvaultahoana nony fomba famindrana wordpress amin'ny sehatra vaovaony fomba fanoratanamifindra WordPressmifindra wordpressmamindra wordpressWordPress
Torolàlana ho an'ny Procrastinator amin'ny marketing amin'ny fialantsasatra
Fandalinana tranga amin'ny marketing: Afaka manao ny marina ve isika?